Global Tank Container ngo-2017 - China Yangzhong Luck Star ukutywina
Itanki container fleet jikelele iqulathe uluhlu lweentlobo itanki kuquka neetanki ulwelo, igesi yepetroliyam, Ithatyathwe emigutyeni yonke, utshintsho amatanki kunye specials. Amatanki ngezantsi 20ft ubude ezifana nezo lifana kushishino yeoli offshore azifakwanga kweli Survey. Le container wetanki elawulwayo kakhulu kwaye kufuneka ihlangane imigangatho engqongqo yokusebenza, kuquka ukuhlolwa osemthethweni ngamaxesha kunye nokuhlaziywa kweziqinisekiso test. Nangona kunjalo, akukho irejista zehlabathi izikhongozelo itanki. Idatha kufuneka ziqokelelwe ngokucela ngokucwangcisiweyo ngabanini kwitanki nakubanini ukubonelela iinombolo lwezithuthi yenkampani kunye nabavelisi ukuze ingxelo imveliso entsha. Apho data ngokuqinileyo unganikezelwanga, le Survey inika ulwazi oluqikelelwayo ezisekelwe kuphando intanethi thethwano kunye nabameli kushishino abanamava. Amanani Ingxelo zithi zibhalwe njengoko ifunyenwe okanye, kwimeko ngeetshathi ngaphakathi ingxelo, ziziphumo ipesenti ukubala data. Akujongwanga ukuba bacebise ukuba amanani ubalwe zichanile ukuba inani ngqo. Abafundi kufuneka ebezakusondela, okanye phantsi, njengoko kuyimfuneko.
uluhlu lwezithuthi eziqeshiweyo ezingaqukwanga kwi amanani ewonke fleet mveliso, ngaphandle eliqikelelwayo isitokhwe ezimbalwa ukuba lutho. Intsalela "kwi uqeshiso" amatanki uqobo kuqikelelwa ukuba kuqeshisa abasebenzi (65%) kunye keli kunye nabanye abasebenzisi itanki (35%). Le pesenti ukuze kunokuhluka tar inkampani njengako amandla zawo kwimarike kunye neenjongo, kodwa umlinganiselo Kulinganiselwa. Lo mkhuba ukuba ingxenye enkulu kuqeshiswa nababoneleli kodwa kane kunye nophando odlulileyo ipesenti hlula kuhlala ingatshintshanga.
Njengoko kukho nokuyinto bangaphandle ulungiselelo kwitanki kubaqhubi kwitanki, kusekho wayenomkhosi elilawulwayo ngqo keli kunye nabanye. Ukuhanjiswa (nezaziwa ngokuba kubavelisi okanye consignors) zezithuthi kunye nabanye zinzima ukuvavanya ngenxa yenani elikhulu keli nabanye ehlabathini lonke. Kunzima kakhulu ukuba iqulunqe uluhlu izikhongozelo itanki eziphantsi owakungqina--, kuba ubunini itanki yinxenye elincinane ngokwentelekiso ishishini labo core - ngenxa yoko - amanani fleet azifumaneki lula. Oku kukwasebenza kwabanye abasebenzisi kwitanki - ezifana nemigca zeenqanawa, mandla zomkhosi, iziporo, iinkampani ioli, imboni kunye China zasekhaya. Kulinganiselwa
"Abanye" zizonke ziqukiwe kule Survey.
Ngenxa yoko lo mkhwa ukubonelela ngozalisekiso lwezibonelelo logistics kwitanki kuqikelelwa ukuba kwizithuthi owakungqina- kunye nabanye abanini yi static. Abanini ukuze anikezele ngeenkonzo kwempahla neenkonzo kwamatanki eziphantsi owakungqina--, kodwa amatanki azifakwanga njengoko kwamatanki umqhubi injongo yolu phando. Kuqikelelwa ukuba avareji malunga ne-35% yabo bebonke izithuthi inkampani kokuqeshisa iqeshiswa ngqo keli kunye nabanye. Ngo-2013 Survey kwaye kuqikelelwa ukuba amaKristu kunye nabanye ungase, ngokomlinganiselo, malunga nenani elilinganayo kwamatanki ukuba ziqeshwe kwi izithuthi zabo. Eli nani kuhlala zingatshintshi-2016 Survey kwaye kwiminyaka engaphambili. Abasebenzisi Survey ungenza uhlengahlengiso ukuze zilungele iimfuno zabo. ngeenkcukacha ezithe vetshe indlela banikwa nokuchazwa iitafile kunye nemifanekiso ezihamba.
ixesha Post: May-28-2018